caliahmed – Geelle Magazine
Sool iyo Sanaag
Saynisyahanno ku dhawaaqay is bedbedello ku dhaca Fayraska Corona
caliahmed Posted On May 9, 2020
Cilmi baadheyaal Mareykan iyo Ingiriis ah ayaa ogaaday boqolaal isbedel oo ku dhaca fayraska kuwaas oo keena cudurka Covid 19. Laakiin ilaa haatan midkoodna masoo bandhigin waxa arintan ay ogaadeen uga dhigan tahay in fayrasku ku fido dadka iyo waxtarka […]
Muqdisho / Wararka
Xildhibaano eedeyn usoo jeediyey Madaxweyne Farmaajo
Xildhibaano ka tirsan labadda Aqal ee Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegay in Madaxweynaha Soomaaliya ay kula xisaabtami doonaan sababta Ciidamo aan qeyb ka aheyn AMISOM ay gacanta ugu hayeen Garoonka Bardaale. Xildhibaanada ayaa sheegay in Madaxweynaha Soomaaliya uu […]
Shiinaha oo muddo kadib laga helay hal kiis oo Covid 19 ah
Shiinaha ayaa diiwaangeliyey hal kiis oo Covid 19 ah maalintii shalay aheyd Sidda ay shaacisey hay’adda caafimaadka qaranka maanta. Halka kiis ayaa ah qof dalka dibadiisa laga keenay 8-dii May ee sanadkan. Dowladda Shiinaha ayaa ku dhawaaqday in ay si […]
Taliska AMISOM oo caddeeyey cidii ka dambeysay diyaaradii lagu soo riday Bardaale
Warqad kasoo baxday axfiiska Taliska Ciidanka AMISOM ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in taliska AMISOM uusan wax lug ah ku laheyn diyaaradii gargaarka siday ee dhawaan kusoo dhacday degmada Bardaale ee gobolka Bay. Warqad loo diray Midowga Afrika ayaa lagu […]
Fayraska Corona oo kusii fidaya Aqalka Cad ee Mareykanka
Kaaliye sare oo ka tirsan xafiiska madaxwayne ku xigeenka Mareykanka ayaa laga helay cudurka Coronavirus maalin uun kadib markii xubin ka tirsan shaqaalaha Aqalka cad laga helay Covid 19. Katie Miller, ayaa noqonaysa sargaalkii labaad oo ka tirsan Aqalka cad […]
Talyaaniga oo noqday dalka ugu dhimashada badan dalalka Yurub ee Covid 19
Dalka Talyaaniga ayaa noqday dalkii ugu horreeyey ee ka tirsan Midowga Yurub ee diiwaangeliya in ka badan 30,000 oo ah dhimasho la xiriira Cudurka Covid 19. Shalay oo Jimco ahayd waxaa la shaaciyey 243 oo dhimasho cusub ah, halka maalintii […]
Somaliland / Wararka
Somaliland oo xaqiijisey kiisaskii ugu badnaa ee Covid 19
Wasaaradda Caafimaadka Jamhuuriyadda Somaliland ayaa maalinnimadii shalay aheyd xaqiijisey 11 qof oo cudurka Covid 19 laga helay. Wasaaradda ayaa sidoo kale xaqiijisey hal qof oo cusub oo u geeriyooday cudurkan. Dadka laga helay cudurkan ayaa kala jooga Hargeysa, Sanaag iyo Burco. Agaasimaha […]
Puntland / Wararka
Puntland oo ka walaacsan Cudurka Covid 19 oo kusii fidayo deegaanadeeda
caliahmed Posted On May 6, 2020
Kulan ay Maanta yeesheen Guddiga wacyi-gelinta iyo xakameynta Cudurka Coronavirus ee Puntland iyo Dhaqaatiirta ka howl-gasha deegaannada Maamulkaas ayaa waxaa looga hadlay sidii la isaga kaashan lahaa ka hortegidda iyo la tacaalida Caabuqan. Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Maamulka Puntland, Jaamac Faarax […]
Theresa May oo madaxda caalamka ku eedeysay in ay ka gaabiyeen la tacaalidda Covid 19
Ra’iisul wasaarihii hore ee dalka UK Theresa May, ayaa madaxda caalamka ku caambaareysay in ay ka gaabiyeen la tacaalidda Cudurka safmarka ah ee Coronavirus. Waxa ay ka digtay in iskaashi la’aanta wadamada caalamka ay horseedi karto khatar weyn. Hadalka Mrs […]
AMISOM oo soo dhoweysay in baaritaan lagu sameeyo diyaaraddii ku dhacday Bardaale
War saxaafadeed ay soo saartay AMISOM, ayey ku sheegtay in ay soo dhawaynayso go’aanka ay dowladaha Soomaaliya, Kenya iyo Itoobiya ku baarayaan diyaaraddii ku burburtay degmada Bardaale ee gobolka Baay. “Waxaan jeclaan lahayn inaan taageeraheenii soo jireenka ahaa aan u […]
© Copyright Geelle Magazine